Baqwashiswe ngocansi olungaphephile abafundi basemakolishi | News24
Baqwashiswe ngocansi olungaphephile abafundi basemakolishi
ISITHOMBE:SITHUNYELWWE UNgqongqoshe woMnyango weZempilo uDkt. Sibongiseni Dhlomo uqwashise bafundi be FET mayelana nocansi olungaphephile kumkhankaso iDual Prorection. Lo mkhankaso ubhekene ngqo nabafundi bezikhungo zama FET.
BAZOQWASHISWA ngokubaluleka kokuzivikela uma beya ocansini abafundi bezikhungo zemfundo ephezulu ezingamaTertiary Vocational Education and Training (TVET) colleges.
Lo mkhankaso obizwa nge “Dual Protection” uqalwe uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal ngaphansi kukaNgqongqoshe uDkt Sibongiseni Dhlomo ukuqwashisha abafundi ngendlela okumele bazivikele ngayo uma beya ocansini.
Ungqongqoshe wethule lo mkhankaso ngoLwesine olwedlule eMgungundlovu FET edolobheni lapho eluleke khona abafundi waphinda wathumela nomyalezo kubazali wokuthi kunezinto okumele bazamukele ngentsha esikhulile futhi eseyenza ucansi.
Ekhuluma ngalo mkhankaso obuvuluwa ngokusemthethweni uthe: “ I-Dual Protection ikhuthaza abafundi ukuthi baqinisekise ukuthi bayazivikela uma beya ocansini. Ukuzivikela kwabo akugcini nje ngokuzivikela ezifweni ezithathelanayo zocansi kuphela kodwa sihlose ukuthi intsha lena izivikele nasekukhulelweni okungahlosiwe,” kuchaza uDhlomo.
Uqhube wathi imbangela eyenza ukuthi kuhambelwe lolu hlobo lwezikole ingoba imiphumela eqoqwayo (statistics) iyakuveza ukuthi kuleli zwe lase Ningizimu Africa ngonyaka kuba nesibalo sezingane eziyisigidi ezizalwayo. Uthe le miphumela eqoqwayo iphinda iveze ukuthi abantu okuyibona abakhulelwayo yintsha.
“Kuye kuthi uma labo mama abancane sebethole izingane baqale balahlakelwe umnyombo wempilo kanti futhi amazinga okuthi bathole izifo zocansi ezithathelanayo noma babulawe izifo ezihlangene nokukhulelwa asuke ephezulu.
“Njengoba sazi-ke ukuthi isifundazwe saKwaZulu-Natal sibhekene nenkinga yezinga eliphezulu lesifo sesandulela ngculazi kanye nengculazi sibone kukuhle ukuthi senze lo mkhankaso ukuze sibe nesizwe esikhululekile kulesi sifo.
“Lo mkhankaso uyingxenye yokuzama ukuvimba ukubhebhetheka kwesandulela ngculazi nengculazi uqobo lwayo. Lokho sikwenza ngokuthi sibe nemizamo eminingi ukunqanda ukwanda kwegciwane nezifo,” kusho uDhlomo.
Uphinde wadonsa ngendlebe abafundi ukuthi badlalele kude nodokotela mbumbulu abaye babayenge bathi bazobasiza bahushule izisu ngokushesha. UDhlomo uthe kuye kube nzima ukuhlenga impilo yomuntu wesifazane osuke eseqale kulabo dokotela.
Ubuye wanxusa abazali ukuthi kumele kube yinto abayaziyo ukuthi abantwana babo bayazimbandakanya nokwenza ucansi.
“Abazali kumele bazi futhi izingane zabo ziyalwenza nocansi olungaphephile. Lokhu kufakazelwa ukuthi bayakhulelwa kanti ngesikhathi benza ucansi olungaphephile batheleleka ngegciwane lesandulela ngculazi. Kumele sifunde ukukhuluma ngalezi zinto emiphakathini yethu.
“Kanti-ke nani bafundi nenza ucansi amehlo asuke evulekile nomqondo futhi wazi ukuthi kwenziwani. Into efika yenzeke niye nivumelane nophathina wakho, nithole indawo lapho ningalwenza khona ucansi, nikhumule bese nenza ucansi.
“Ngeke lokho nikubize ngephutha. Ngalo mkhankaso sihlose ukuthi nithi lapho nithola iziqu nibe niphilile futhi niphephile ukuze nikwazi ukuya emakhaya ukuyosebenzela imindeni yenu,” kubeka uDhlomo